Temberi dzeAngkor, hameno muCambodia | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Cambodia, Chii chekuona
Imwe yenzvimbo dzinozivikanwa uye dzinoyevedza dzevashanyi muCambodia ndiyo angkor tembere, dombo rakaomarara rinenge rakamedzwa nesango rine nyoro, kwete kure neguta razvino re Siem Reap.
Vazhinji vanopenga nezve mahombekombe uye mabheji eThailand asi muchokwadi izvi temberi muCambodia Ivo vanoyevedza, uye kana iwe uchida nhoroondo uye zvekuchera matongo, hapana imwe nzvimbo iri nani mune ino chikamu chenyika.
2 Shanyira tembere dzeAngkor
Angkor ishoko rinobva kuSanskrit, mutauro wekare weIndia uyo unenge makore mazana matatu nemazana mashanu ekuberekwa. Nhasi uno mutauro wechiRungu wechiHindu uye unoonekwawo kazhinji muzvinyorwa zvechiBhudha.
Guta reAngkor raive guta guru rekare Khmer Humambo iyo yakabudirira pakati pezana remakore rechiXNUMX nerechigumi nemashanu uye kuti pane imwe nguva raive guta rine vanhu vakawanda. Iri musango rine hunyoro uye rinopisa, padyo neguta reIndi Reap, mudunhu rezita rimwe chete. Kuverengwa zviuru zvematemberiIvo havasi vashoma, uye zvinonakidza kuvaona vachibuda kubva pakati pemafuro manyoro neminda yemupunga.
Archaeology yazvino yakaponesa vazhinji kubva mukunyangarika kwavo nekuti munzvimbo ine hunyoro uye ine huswa hwakawanda, kufamba kwenguva kwave kuvadya pakati pematavi, midzi nemashizha. Kune rimwe divi, UNESCO yakaisa matongo, ese eAngkor Wat neAngkor Thom, pasi pekudzivirirwa kwayo se Nhaka Yenyika.
Anopfuura makore gumi apfuura uye nerubatsiro rwemifananidzo yesataneti zvakawanikwa izvo Angkor raive guta hombe pre-maindasitiri guta pasirese, netembere nenzvimbo dzemadhorobha dzakatenderedza, ine netiweki yemvura yevagari uye yekudonhedza ivhu munzvimbo inonaya ndiyo mirau yezuva.
Zvinotaridza sekunge nezana ramakore regumi nemanomwe Angkor Wat anga asati asiyiwa zvachose, sezvakaratidzwa nemuongorori wechiPutukezi kana nzvimbo dzekuJapan munzvimbo iyi, uye kuti kunyangwe muzana ramakore regumi nemapfumbamwe matongo aya aizivikanwa nevanhu vemo uye akaratidzwa kune vashoma vekuEurope. ..vaivapo. Uye ivo vaiyemura zvekuti mabasa ekudzoreredza akatanga pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX takabatana neboka revanhu veFrance.
Iwo mabasa akaenderera kwemakumi makumi emakore uye raive basa hombe, saka ivo vachangopedza mukupera kwa1993. Wanga uchiziva here kuti mamwe matembere akabviswa dombo nedombo uye akaunganidzwa patsva dzekongiri, semuenzaniso? Mhedzisiro yacho inoyemurika uye ndosaka mumakore achangopfuura huwandu hwevashanyi hwakura zvakanyanya uye mahotera nemaresitorendi atanga kuoneka munzvimbo dzakapoteredza.
Inofungidzirwa kuti ipapo mamirioni maviri evashanyi pagore Uye izvo zvakawandisa kune yekare Angkor saiti. Nehurombo dambudziko harisati ragadziriswa.
Shanyira tembere dzeAngkor
Kutanga iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unofanirwa kutenga pasipoti, iyo Angkor Pass, kushanyira matembere muAngkor Archaeological Park. Unogona kuitenga pamusuwo mukuru kana munzira inoenda kuAngkor Wat. Iko kune kwezuva-rimwe, kwemazuva matatu uye manomwe-mazuva apfuura. Izvo zvinoshandiswa pamazuva akateedzana.
Nzvimbo kuvhura kubva 5am kusvika 6 pm Asi dzimwe nzvimbo dzine nguva dzakasiyana dzekuvhara, saka zviri nyore kuti uzive pamberi pekuti ndedzipi tembere dzausingade kupotsa uye kuziva maawa adzo usati watanga. Kunyange, dzimwe nzvimbo dzine tikiti rakasiyana, saBang Melea kana Phnom Kulen.
Zviri zvekushanya Angkor Wat, Angkor Thom, Bakong, Baksei Chamkrong, Banteay Samre, Bayon Temple, Preah Ko, Terrace yeNzou, uye Phnom Kulen, kungo taura mashoma ekuenda. Nzvimbo yacho yakafara, emakiromita nemakiromita, uye mazhinji ari zvivakwa zvetemberi zvinopfuura kungova tembere.
Angkor Wat Iyo yakanaka uye vazhinji vanofunga kuti iri pakakwirira kweMapiramidhi eEjipitori. Inowanikwa makiromita matanhatu kuchamhembe kweguta reIndi Reap uye kumaodzanyemba kweAngkor Thom. Unogona chete kupinda nekugedhi rekumadokero.
Yakavakwa muhafu yekutanga yezana remakore rechiXNUMX uye zvinofungidzirwa kuti mabasa akatora makumi matatu emakore. Zviri tembere yakatsaurirwa kuna mwari Vishnu y Iyo ndiyo tembere hombe mune yakaoma uye yakanyanya kuchengetedzwa. Inofungidzirwa kuti itembere yemariro yaMambo Suryavarman III, uye iri diki saizi mufananidzo wechisiko chose mune iyo shongwe yepakati inomiririra gomo rengano reMeru, pakati pezvisikwa. Yakakura uye unorasika mudzimba dzayo, maberere, mbiru, patio nemavharanda.
Angkor Thom ndiro raive guta rekupedzisira reMambo weKhmer. Yaiva imwe guta rakavakirirwa kwaigara maofficial, maofficial nemamonki. Izvo zvakagadzirwa nematanda zvakakundwa nenguva asi mabwe ematombo akasara: pakati petembere mukati memadziro aro pane Teresi yeNzou, Bayon, chinzvimbo chaMambo Maperembudzi kana Tep Pranam, Semuyenzaniso. Kune zvakare Royal Palace.
Bayon iri pakati, 1500 metres kubva pamusuwo wekumaodzanyemba. Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX uye nhasi yakakomberedzwa nesango gobvu. Yakavakwa zana ramakore mushure meAngkor Wat. Iyo shongwe ine zviuru zviviri zviso zvakavezwa kubva mumatombo, zvishoma kunyemwerera. Iyo haina rusvingo yakatenderedza uye ine matatu akareruka matanho. Zvakare muAngkor Thom ndiyo Terrace yeNzou, ine zvifananidzo zvemhuka zvinorairwa nemachinda nevashandi.
Kana iwe ukashanyira Angkor Thom uchipinda kuburikidza negedhi rekumaodzanyemba unogona kumira wosangana munzira Baksei Chamkrong. Iko kuvakwa uye kushongedzwa kwetembere diki inoyevedza uye kunogona kukosheswa paunenge uchifamba uchitenderedza. Unogona kukwira kuCentral Sanctuary uchishandisa masitepisi ekuchamhembe kubva muzana ramakore regumi. Banteay Samre.
Iyo tembere iri inenge mazana mana emamita kumabvazuva kweBaray uye zviri nani kupinda kubva kumabvazuva. Inotangira pakati pezana ramakore regumi nemaviri uye yakatsaurirwa kuna Vishnu. Iyo ndeimwe yemahofisi akazara kwazvo muAngkor uye yakadzoreredzwa zvakanyanya kunyangwe ichishaya yekugadzirisa.
Preah Ko Iri muRoluos, pakati peLolei neBakong. Yakavakwa muzana reXNUMXth uye yakatsaurirwa kuna Siva. Iyo tembere yemariro yevabereki vaMambo Indravarman I, akaenzana muchimiro ane madziro neshongwe. Sezvauri kuona, ini ndinogona kuenderera uye nekupa mazita ematemberi nekuti iyo yakaoma yakakura. Nekudaro, ndiani akanaka uye mumaonero angu akakodzera basa rapfuura usati waenda kunosangana naye, zvikasadaro iwe unomira mungozi yekushayikwa zvinhu zvakanaka.
Saina kushanya? Pamwe kwete zano rakaipa. Tembere yega yega yakakosha asi zvinogona kuti mushure mekanguva vese vanoita senge zvakafanana kwauri, sezvinoitika kana iwe uchishanyira dzimbahwe, mamiziyamu kana machechi, saka tsvagurudza usati waenda kunonyora zvaunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Tembere dzeAngkor, hameno muCambodia